Kk Flat vulu Extruder, Plastic extruder, Kk ephothiweyo ISetyhula wabenza
IFORCE INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD, inkampani ebanzi esekwe ngo-Okthobha u-2001, ikhethekileyo kuphuhliso, imveliso kunye nokuthengiswa koomatshini beebhegi eziphothiweyo. Iimveliso eziphambili zenkampani zibandakanya oku kulandelayo, I-Flat Yarn Extruder, Umatshini ojikelezayo weCam, Umatshini weSetyhula, Umatshini wokuprinta we-BOP, Umatshini wokuLaminisha, umatshini wokuGingqa oZenzekelayo, uMatshini wokuTywina we-Ultrasonic, Umatshini weBaling, Umatshini wokuCoca iNtambo yeNkunkuma, iPlastikhi yokutyhiliza kunye nokuGcina ukuSebenzisa iGranulator njl.
Amava emveliso engama-20
Yasekwa ngonyaka ka-2001, 300+ abasebenzi abaqeqeshiweyo, sinamava ngokwaneleyo ekwakheni oomatshini iingxowa ephothiweyo PP.
Khuphela imigca yonke yokwenza iibhegi zeplastiki
Sinako unikeze zonke iintlobo zemigca yemveliso, ezifana PP umgca wemveliso iingxowa, BOPP yoshicilelo iingxowa umgca wemveliso, leno iingxowa enemingxuma yemveliso umgca kunye PP ibhloko ixabiso umgca ezantsi imveliso imveliso njl
Kwizinga eliphezulu PP ephothiweyo ibhegi ekwenziweni koomatshini
Abasebenzi abaqeqeshiweyo, amava emveliso etyebileyo, itekhnoloji ephezulu kunye nemveliso esemgangathweni qinisekisa ukuba zonke iimveliso ezivela kwinkampani yethu zikumgangatho ophezulu.
Ngaphezulu emva kwenkonzo
Ukufakwa, ukulungisa ingxaki, uqeqesho lobuchwephesha kunye nesikhokelo sevidiyo njl.nkonzo yokumisa enye ikwenza ungabi naxhala.
PP iingxowa ephothiweyo eshushu ...
PP ephothiweyo Bags Col ...
Sika iingxowa enemingxuma
PP ephothiweyo Bags Sew ...
Umatshini wokuprinta (...
Ngaphambili nasemva Pr ...
PP ephothiweyo Bags Ult ...
Zenzekelayo Cutting ...
Ukuthunga ngokuzenzekelayo ...
Ukusika okushushu kunye noC ...
Auto Cutting Long ...
Ngokuzenzekelayo Co ...
Full oluzenzekelayo PP ...
PP ephothiweyo Cement B ...
PP Flat vulu Extr ...
ISETYHULA Jikeleza (4 S ...
ISETYHULA Jikelezisa ...
(Ngesiqhelo) Leno ...
Ingxowa yeRaschel Knitt ...
Ulawulo lwekhompyuter ...
Uthotho lweNX 4-800 (...
Ushicilelo lweFlexo ...
Isibini esandayo ...
Umatshini wokugaya ...
Gusseti ezenzekelayo ...
Intambo yeNkunkuma uBobbi ...
Ngabaphi oomatshini abafunekayo kumgca wemveliso yeengxowa zonke ze-PP?
Ukwenza imveliso yeebhegi ze-PP xa zizonke, zihlala zifuna oomatshini abali-14, Umxhubi owomileyo, uMondli oZenzekelayo, uMatshini ojikelezayo weCam, Umatshini weSetyhula, uLawulo lweKhompyuter Umatshini wokuPrinta we-6 Umbala, Umatshini omnye wokuPrinta i-Die Lamination Machine, iGusseti ezenzekelayo ...
Indlela ukukhetha umatshini wakho yoshicilelo for PP iingxowa ephothiweyo?
Kukho iintlobo ngeentlobo zoomatshini bokushicilela kwimarike, zijongeka zahlukile kakhulu ezenza ukuba sibe nesiyezi. Ke sibakhetha njani oomatshini bokushicilela abafanelekileyo kumzi-mveliso wethu? Nazi ezinye iingcebiso. Okokuqala, kufuneka sihlele oomatshini bokushicilela kwimarike, banokuba ngumatshini wokushicilela we-machi ...
Imigca emibini / yeengxowa zemveliso yeebhegi ezahlukeneyo
Zimbini iibhegi zemesh / zeeleno ezahlukeneyo kwintengiso, zinembonakalo eyahlukileyo, ezantsi, pls. Mesh / Leno / iingxowa raschel ngu ukusika thermal ...